यी १२ वर्षीया बालिका : जसले स्कटल्याण्डको विश्वकप जर्सी डिजाइन गरिन्
By क्रिकेट पाटी	 On Oct 22, 2021
तपाईं १२ वर्षमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? सायद तपाईं संसारलाई बुझ्ने प्रक्रियामा नै हुनुहन्थ्यो होला र तपाईंले अझै धेरै कुरा थाहा पाउन बाँकी नै थियो होला । तर, रेबेका डाउनीले १२ वर्षको उमेरमा के गरिन् होला? एकछिन अनुमान गरौं । उनले टी-२० विश्वकपका लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय समूहका लागि जर्सी डिजाइन गरिन् ।
यो कुनै ठट्टा होइन । टी-२० विश्वकपका लागि स्कटल्याण्डको नयाँ जर्सी १२ वर्षे बालिकाले डिजाइन गरेकी हुन् । र, यो निकै अद्भूत छ । यो समूहले देशभरिका स्कूले बालबालिकाबाट आएका २ सय बढी डिजाइनबाट उनको डिजाइन छनोट गरेको हो । यो जर्सी स्कटल्याण्डको राष्ट्रिय चिन्ह- द थिस्टलको रङहरूमा आधारित छ ।
ओमान उड्नुअघि यो समूहलाई रेबेकाले उक्त नयाँ जर्सी उपहार स्वरूप प्रदान गरिन् । एडिनबर्गमा जिम्बाम्बेविरुद्धको खेलमा उनी र उनको परिवार विशेष पाहुना थिए । त्यहाँ उनले खेलाडीलाई पनि भेटिन् ।
‘मैले प्रतिस्पर्धा जितेँ भन्ने खबर पाएपछि निकै उत्साहित भएँ । सुरुमा त मैले विश्वास नै गर्न सकिनँ । त्यो सर्ट वास्तविक जीवनमा देख्दा म असाध्यै खुसी भएँ । ती निकै सुन्दर देखिए । खिलाडीलाई भेट्न पाउनु र उहाँहरूले जिम्बोम्बेविरुद्ध खेलेको हेर्न पाउनु एउटा अद्भूत अनुभव रह्यो । म मेरो आफ्नै सर्ट लगाएर विश्व कपको प्रत्येक खेलमा उहाँहरूलाई चियर गर्नेछु,’ क्रिकेट एण्ड मोरले उनको भनाई उद्धृत गर्दै भनेको छ ।
‘रेबेका र उनको परिवारलाई भेट्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ । रेबेकाले नयाँ सर्ट लगाएको देख्दा पनि साह्रै आनन्द आयो । हाम्रो समूहलाई उनको यो डिजाइनमाथि गर्व छ । प्रशंसकलाई हाम्रो नयाँ डिजाइन मनपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं,’ स्कटल्याण्ड टोलीका कप्तान कोइट्जरले भने ।
चेन्नई र बैंग्लोरको म्याच आज, देख्न पाइने छ चौका/छक्काको वर्षा
दीपेन्द्र ऐरीलाई मनपर्ने दुई विदेशी क्रिकेटर
जिम्बाब्वेमाथि बंगलादेशको फराकिलो जित, नइम र सरकारको उत्कृष्ट पारी
यी तीन विश्व चर्चित क्रिकेटर : जसले धेरै म्याच खेले पनि कहिल्यै बलिङ गरेनन्